Indlu yelizwe-Bann Suan Phu Ann Chan
Inqugwala sinombuki zindwendwe onguChutirada
*** Phantsi kweemeko ze-COVID-19, oku ukugcina abantu basekhaya bekhuselekile, ngoku samkela ukubhukisha kuphela abaxhasi abagonywe ngokupheleleyo. Ngaphambi kokuba ubhukishe, kufuneka ubonise isatifikethi sokugonya sawo onke amalungu (alindele abantwana abangaphantsi kweminyaka eli-12 ubudala) ***
UWang Nam Khiao waziwa njengeSwitzerland yaseThailand. Apha, kukho udederhu lweentaba ezityebileyo eziluhlaza, imiyezo echumileyo namabhoma. Ngeembono zendalo eziphefumlayo.
EBann Suan Phu Ann Chan, izindlu zelizwe losapho. Akukho nto intle apha, ukuba ujonge indawo ekufutshane neentaba kunye nendalo apho unokuphumla kwaye ubukele abantu basekhaya belima, belima, le yeyona ndawo ungathanda ukuba kuyo.
Xa ndisithi akukho nto imnandi apha, ayithethi ukuba kuyakudika. Kukho indawo enkulu yomhlaba apho unokonwabela ukumisa inkampu, ukuloba, ukukhwela ibhayisekile ukuya kwindawo ekufutshane, ukuhlamba inyama, ukulima, ukuchola iziqhamo kunye nemifuno yexesha elithile (imango, ibhanana, iziqhamo zegac, iziqhamo zeenkwenkwezi, iavokhado, ipapaya, itshilisi, ii-eggplants, banana chilis, broccoli Chinese, uzuko kusasa, basil Thai kunye nokunye). Uyibiza ngegama, sikhulisa yonke into apha.
Kukho izindlu ezi-2 kunye neofisi / indawo yokupholisa ebekwe kwindawo enye.
I-Country Hut yindlu enegumbi elinye lokulala ene-ensuite yokuhlambela. Igumbi lokuhlala lineebhedi ezimbini ezinkulu apho abantu ababini banokulala kuzo kamnandi. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo apho unokupheka khona imveliso esandul' ukukhiwa ezigadini.
IJungle Hut yindlu encinci ebekwe kude kancinci ukusuka kwindlwana yeLizwe. Ukuba ufuna ukuphumla kwaye ukonwabele indalo le ndlu kulapho ujonge khona. Akukho zixhobo apha ngaphandle kwamandla, ifeni, inethi yeengcongconi kunye ne-transistor yesikolo esidala. Sukuba nexhala kukho amagumbi okuhlambela okwabelwana ngawo abekwe kufutshane.
Umbuki zindwendwe ngu- Chutirada